IiTattoos zeForearm-Imibono yeeMilo kunye noYilo | Amadoda aneSitayile
Iitattoo ngu fimo yomfuziselo nenomtsalane ukubumba ubuntu bethu. Okwangoku, ii-tattoos zithandwa kakhulu kwaye ngokuqhelekileyo kuyo yonke le minyaka kunye namashumi eminyaka amadoda nabasetyhini babhala yonke into. Tattoos kwi forearms yindawo leyo ngoku ibeka intsingiselo kwaye ungaqala ngomzobo olula, okanye uvale yonke indawo.
Ukuba unomdla kwizinto ezifashiniweyo kunye nemizobo onokuthi uyibambe ngulo mkhondo omncinci wobuntu bakho, apha sikubonisa into eninzi ekhoyo ngoku. Khumbula ukuba yindawo ebonakalayo, kwaye ndisathanda ukubonisa. Kodwa ukuba uyathanda, inokuba yindawo onokuthi uyigqume.
1 Iitattoo zesizwe
2 Iitattoo zezilwanyana
3 Iitattoos ezinamabinzana
4 Iibhengele ezincinci
5 Iitolo zetolo
6 Iitattoos ze-Watercolor
Isimboli kunye nokumila kwezi tattoos luphawu lwenkcubeko ethile waza wahlangulwa kwizizwe ezinjengamaCelt, amaBorneo okanye amaMaori. Iimilo zabo ziye zathabatheka kuzo zonke ezinye iinkcubeko kwaye zabenza babonakala begqibelele. kwiindawo ezifana neengalo nomqolo. Abemi bendoda baziva benamandla kwaye benamandla beveza iitattoos zabo kwizandla zabo, ngakumbi malunga ne-contour yabo, ngaphandle kokushiya naziphi na iindawo ezikhululekile.
Kukho imizobo enesimboli ethile, evela kuyo phawula amandla kunye nesibindi, kwanabo bafanekisela ubunkokeli, ngobuzwe obunemilo yezilwanyana okanye nawuphi na omnye umzobo onamacala amathathu. ezinemilo engokoqobo kakhulu. Ngokubanzi le mizobo izotywa ngemigca eshinyeneyo, emele iimo zezinye iinkcubeko zemveli okanye umlo wamagorha.
Bayayithanda imifanekiso yezilwanyana banika ubunkokeli namandla. Ukusuka kumaxhalanga, iibhere iingcuka, okanye ubuso behlosi. I-forearm ivuma ukungapheliyo kwemilo kunye nemibala, sinokukhetha isilwanyana esifana kakhulu nobuntu bethu. Iikati okanye iimazi, kwaneengonyama zimele amandla kunye noburhalarhume. Amahobe amele uxolo nothando. I-Hummingbirds ixhaphake kakhulu kubasetyhini kwaye isoloko ifakwe tattoo ngeentyatyambo. Namela uvuyo, amandla kunye noxolo.
Kutheni iitattoos ezinamabinzana okanye amagama angatshatanga? Amagama anokubonisa into ebalulekileyo ebomini bethu, nokuba kungesiNgesi okanye kulwimi ngokwalo. Uninzi lwazo lukotshwe kwi iingcingane ezinkulu okanye amagama ethu abantu esibathandayo, amabinzana othando, ubuhlobo okanye ubuzalwana, into ebalulekileyo kukubamba into leyo asifuni ukuba ibhabha imke ngexesha.
Amanye amabinzana okanye amagama elinye anokukhuthaza: Uthando, Mahala, Isibindi, Uvuyo, Khawube nomfanekiso-ngqondweni, Uphila, Ukungazinzi, 'yamkela ikamva', 'ungaze uyeke ukuphupha', 'ncuma yonke imihla', 'ngaphandle kokuphumla'. Khumbula ukuba banako iileta zesilika kunye neemilo ezintle kakhulu kunye nezandla, okanye zikhapha ngemizobo efana nezaphetha, iintliziyo, imigca emincinci egobileyo okanye utolo.
Ziyimvelaphi, zilula kwaye zinxiba ngokulinganayo kuzo zombini izini. Imizobo iphefumlelwe ngokubanzi iimilo zezizwe, iibhengele zepolynesian, ezo zinxulumene nemizobo iicelts okanye amaNdiya. Umsebenzi wakhe wenziwa njengebheji yezigebenga, kungoko iitattoos zaseJapan zemafia kunye nolwaphulo-mthetho lwaseJapan.
Iintolo zikwangomnye umzobo weempawu. Ukumila kwawo kubonisa indlela kwaye kulapho sifuna ukukhomba okanye tsalela ingqalelo kwinto ethile. Lisenokuthetha ukukhuselwa okanye kwanesibakala sokuba ukufikelela usukelo olunjengothando. Ubume botolo buhambelana kakuhle kakhulu kwi-forearm, ingaba tattoo elula okanye kunye nesethi yeentolo.
Yindlela yobugcisa kunye nommeli wefomathi ye-watercolor, eshiya thina iitattoos ezintle kwaye ezinemibala. Ukuqulunqwa kwale mizobo kubukeka kakhulu kwaye kunzima kakhulu ukuyila ngenxa yokumelwa kwayo idriphu. Nangona zibukeka njengemifanekiso enemibala emininzi, azikho ii-tattoos zamantombazana, kodwa kunokuba abafana babonise imizobo yabo ngobuchule bokuqala.
Kukho uyilo oluxhaphake kakhulu lwezilwanyana, zisabonisa ngentsingiselo ebalaseleyo. Kukho imizobo yeengcungcu, iikati, iingoma zezinja, iingcuka, amabhabhathane, iintyatyambo, kodwa kunye neemilo zejometri kunye neemilo ezingabonakaliyo.
Uyilo lunokungenasipheloZingaba yimizuzu yenguqu kumntu, ofuna ukubonisa ukukhathazeka kwabo kwi tattoo. Iinkumbulo zabantu, imizobo emele iingcali, ezifana nezo zemvumi, okanye ukuzonwabisa kwento ethile, enjengomxholo waseYiputa.
Recuerda que iitattoos zisefashonini kwaye kufuneka wazi indlela yokubanyamekela. Kumnandi kakhulu ukubona ulusu lunxibe ezi canvases, kodwa lunokuba nengxaki yexesha elide, kuba ubomi buyakuba neendleko ezinkulu xa uzisusa.
Ngoku baninzi abantu esinokubabona ngemizimba yabo ene tattoo, nakwiindawo ezibonakala njengeengalo. Nangona kusekho imisebenzi ebona umqobo wokuba abantu babhalwe kwizikhundla zabo. Ayizizo zonke ezingalunganga, iitattoos nazo zineengenelo zazo, ukuze uzazi ungacofa eli khonkco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » fashion » Iimpawu zangaphambili